medical knowledge – စာမကျြနှာ7– Healthy Life Journal
နုပျိုကျန်းမာစွာ အသက်ရှည်ရေးအတွက် အင်တီအောက်ဆီးဒင့်၏ အစွမ်း
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— လူတိုင်းဟာ ကျက်သရေရှိရှိ လှပတင့်တယ်စွာ အိုမင်းလိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နုပျိုကျန်းမာနေအောင် ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လူတိုင်းကတော့ မလိုက်နာနိုင်ကြပါဘူး။ နုပျိုကျန်းမာဖို့နဲ့ အသက်ရှည်ဖို့အတွက် မှော်လိုပဲအစွမ်းရှိတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်း တစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်(Antioxidant)လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းပဲ...
အူမကြီးကို သန့်စင်ပေးနိုင်သော အစားအစာ ၁၀ မျိုး
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့ အစားအသောက်တွေမှာ ကောင်းတာရော မကောင်းတာရော ပါနိုင်တဲ့အတွက် အူမကြီးကို ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေက သန့်စင်ပေးနိုင်သလဲဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ ၁။ သံပရိုသီး အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့ သံပရိုသီးလို အသီးတွေက အစာခြေစနစ်ကို သန့်စင်ပေးဖို့ အကောင်းဆုံးအသီးဖြစ်ပါတယ်။ မနက်တိုင်း...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သွေးဖိအားမြင့်တက်တာက ကုသမှုမခံယူရင် သွေးတိုးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းနဲ့ တခြားနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါဝေဒနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အစားအသောက်က သွေးဖိအားမြင့်တက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက် သွေးဖိအားထိန်းချုပ်နိုင်အောင် အောက်ပါအစားအသောက်တွေကို စားသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ သဘာဝဆေး (၁) ဖရဲသီး ဖရဲသီးက သွေးတိုးတာအတွက်...
ခြင်ကိုက်ခြင်းကြောင့် ကူးစက်ပိုးမ၀င်စေရန် . . .
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ခြင်ကိုက်တာဟာ တကယ်ကို စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေပါ။ ခြင်ကိုက်တဲ့နေရာကို သင့်အနေနဲ့ လက်နဲ့ကုတ်ခြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အရေပြားပေါက်ပြဲသွားပြီး ကူးစက်ပိုးဝင်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခြင်ကိုက်တာကြောင့် ကူးစက်ပိုးမ၀င်အောင် ကာကွယ်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နည်းလမ်း (၁)...
လိပ်ခေါင်းကာကွယ်ရေးအတွက် အစာ ၈ မျိုး
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— လိပ်ခေါင်းကာကွယ်ရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ အစားအစာတွေက လိပ်ခေါင်းမဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးရုံသာမက လိပ်ခေါင်းအနာကျက်အောင်လည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ (၁) ဘလူးဘယ်ရီသီး ဘလူးဘယ်ရီသီးတွေက အချိန်တိုင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ အညီညွတ်ဆုံး အစာတွေထဲက တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အန်သိုဆိုင်ယာနင်ဓာတ် ပါဝင်တာကြောင့် သွေးကြောတွေရှိ...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အသည်းဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒုတိယအကြီးဆုံး အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းဟာ စားသောက်သမျှ အစားအသောက်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ အသည်းဟာ ဗီတာမင်တွေကို သိုလှောင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့...
———၊ ဇွန် ၊——— ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းပြီး အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ဖို့ရာအတွက် ရောဂါဘယကင်းနေဖို့ လိုသလို နောက်ထပ်ရောဂါမရအောင် ကာကွယ်သင့်တာတွေကို နှလုံးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာOZ က ဖြေကြားပေးထားတာပါ။ သက်ရှည်ကျန်းမာဖို့အတွက် အရေးပါပေမယ့် လူတွေက ဘယ်အကြံဉာဏ်ကို အလေးမထားဘူးလဲ။ ကြွက်သားထုထည်ကို တည်ဆောက်ပေးပါဆိုတဲ့ အကြံဉာဏ်ပါပဲ။ အားအင်ချည့်နဲ့တာက...
ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံပြသသင့်ပြီဖြစ်သော လက္ခဏာလေးရပ်
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဆီးမထိန်းနိုင်တဲ့ တချို့လက္ခဏာရပ်တွေက သိသာထင်ရှားပါတယ်။ ဆီးတွေက မသိမသာ စိမ့်ထွက်နေတာ၊ ဆီးကို ထိန်းလို့မရတာစတာတွေဟာ ဆီးအိတ်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်တာကြောင့် အောက်ပါလက္ခဏာလေးရပ်ကို ကြုံတွေ့နေရရင် ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါကုဆရာဝန်ကြီး ဒါမှမဟုတ် သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ လက္ခဏာ...
ဆီးချိုရောဂါ ကုသတဲ့အခါ . . .
−−−−−၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊−−−−− Q. ဆီးချိုရောဂါ ကုသတဲ့အခါ ဘယ်အချက်တွေကို သတိထားရပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆီးချိုရောဂါက ဘယ်တော့မှ တစ်ခုတည်း မလာပါဘူး။ အ၀လွန်ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ သွေးတွင်းအဆီများတာ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာ၊ လေဖြတ်တာ...